Lukkuuwwan killee qoricha farra kaansarii buusan - BBC News Afaan Oromoo
Lukkuuwwan killee qoricha farra kaansarii buusan
28 Amajjii 2019
Goodayyaa suuraa Lukkuuwwan kunneen qaccee sanyii namaa akka killee qorichummaaf barbaachisan buusuuf danda'an.
Qorattoonni lukkuuwwan killee dhukkuboota walargaa lafee ('arthritis') fi kaansariitiif qoricha ta'an akka buusaniif qorannoodhaan argachu beeksiisan.
Qorichoonni kunneenis kanneen warshaadhaan omishaman irraa yeroo 100n rakasa jedhameera.
Qorannoonni kunneenis yeroon boodas omishinni killee qorichaa kun baayyina gabaaf dhiyaatuittu akka baayifamu danda'u amanu.
Lukkuwwanis yoo beeladoota qonnaa biraatiin walibiratti ilaalaman kan hin hubamne ta'u Dr Lisaa Heroon Edinburiitti teknolojistiin Roslin ni himti.
''Dallaa baayyee bal'aa ta'e keessa jiraatu. Guyyaa guyyaanis teknolojistoota baayyee leenji'aniin kunuunsii taasifamuufiin haala mijataa keessa jiraatu.
''Lukkuuwanifis akkuma waan killee umamaa buusaniiti. Karaa kamiiniyyuu fayya isaanitiif dhiibbaa hinqabaatu. Kaakkisanii killee buusuudhuma.''
Kana duras saayintistoonni ree'oota, illeentii fi lukkuuwwan qorannoodhaan fooyyeefamuun akka qorichi pirotiiniif fayyadu aannan isaanii keessatti ykn killee saanii keessatti omishuun akka danda'amu mul'isanii ture.
Qorattoonnis argannoon isaanii haaraan kan duraa caalaa baayyee gaarii, kan bu'aa fooyya'aa argamsiisee fi kan duraa caalaa gatiidhaanis gaarii ta'u himu.
''Omishni lukkuu irraa argamu eessattu kan warshaa irraa harka 10 -100tiin rakasa ta'u danda'a.
Kanaafuu, walumaagalatti akka kan waraatiin gadii yeroo 10n rakkasa ta'u abdataa jirra,'' jedha Dr Heroon.
Goodayyaa suuraa Killeewwan kunneen qabiyyee qorichaa laaboraatoriiwwan keessatti omishaman gadii yeroo 10n rakasu qabataniiru
Gatiin hir'achuun irra caalaa kan dhufees bakka lukkuuwwan jiraatan ijaaruu baafamuuf kan qulqullina kutaa oomisha warshaa eeguuf baafamuun gadii taa'usaati.
Dhukkuboonni baayyenis sababii qaamni umamaan kemikaalaa ykn pirotiinii ta'ee omishuu hin dandeenyeefiidha.
Dhukkubboonni akkasiis qorichoota pirootiiniiwwan hirata kanneen qabaataniin to'atamu danda'u.
Qorichoonni akkasiis kubbaaniyoota qoricha omishaniin omishamaa kan turanii fi omishuudhaafis baayyee mi'aa dha.
Dr Heroon fi hirriyyoni isaanii qaccee sanyii ilamaan namaa itti galchuudhaan; akka pirootinii ilmaan namaa omishan taasisuun, gatiin isaa akka rakasu taasusuu danda'aniiru. Kunis qaama (DNA) lukkuun akka killee keessa isa adii omisha isaan dandeessisu keessatti pirootiin ilmaan namaa galchuun kan raawwatameedha.
Cabsuudhaan erga wiirtuu killee (waakkaa) isa adiin adda baafameen booda, lukkuun qabiiyyee pirootiin caalaa qabaachusaa akka argatan Dr Heroon ni dubbatu.
Garichiis gosawwan pirootiin sirna 'immune'tiif caalaa barbachisan irratti xiyyeefate. Tokkonsaa 'IFNalpha2a' kan jedhamu yoo ta'u, inni farra vaayirasii fi kaansarii cimaa kan qabuudha.
Inni lammaffan ammoo 'macrophage-CSF' kan jedhamu yoo ta'u, tishuuwwan hubaman deebii'anii akka lellisuuf qoricha gargaaruudha.
Kileewwan sadiif qoricha doozii tokko omishuuf gahaa yoo ta'u lukkuun ammoo waggaatti hanga killee 300 buusuu dnadeessi.
Kanaafuu lukkuuwwan gahaadhaan killee hanga gaabaadhaa ta'uu omishuun akka danda'amu qorattoonni ni abdatu.
Guddinni qorichoota fayyina ilamaan namaa fi barbaachisuummaan daangaawwan too'annoo waggoota 10- 20 jidduu fudhachu danda'a. Qorattoonni kunnenis lukkuuwwanitti fayyadamuun fayyaa beeladootaafis qorchi oomishuuf abdataa jiru.
Kunis qoricha 'antibiotics' bakka bu'uun beeladootiin qonnaa akka sirna 'immune' isaanii cimfatan gargaaruu kan hammatudha.
Kunis balaa akka raammoowwan cicimmoo haaraan qoricha 'antibiotics' mo'atan akka hin umameeneef ni hirisa jedhameera.
''Fakeenyaafis, kanatti fayyadamuun beeladoota manaa tiruu fi kaleen isaanii miidhame akka deebii'ee fayyuuf itti fayadamuu ni dandeenya. Qorichoon ammaan tana jira baayyee kan qaala'an yoo ta'u, kanaafuu suutaa wal jalaan geedaru akka dandeenyu amana,'' jedhu Dr Haaroon.
Institutii Yunivastiitii Edinburgh's Roslin irraa Profeesar Heelen Saang gama isaanitiin, ''namootaaf ganaa qorichicha omishaa hinjirru, garuu qorannoon kun lukkuuwwan pirotiiniiwwan qorichaaf ta'ani fi 'biotechnology' keessatti gumaatawwan biraa omishuudhaaf akka dandeessisan qoranichi adda baaseera.''
Viidiyoo Doolaarri hanqina qoricha uumee
Miseensonni koree araaraa Anfillootti 'butaman'
'Dhimmi isaa namoota buqqisuu osoo hintaane, seera kabachiisuudha'